China GDU ụdị sịlịkọn carbide kpo oku mmewere ụlọ ọrụ na-emepụta | ỌRT
Obodo Zhaowan, Obodo Zhangguo, Xinghua City, Jiangsu Province, China
GD / HGD ụdị sịlịkọn carbide kpo oku mmewere
MHD1600 sịlịkọn carbide kpo oku mmewere
LS ụdị (abụọ gburugburu) sịlịkọn carbide kpo oku mmewere
GDU ụdị sịlịkọn carbide kpo oku mmewere
GC ụdị sịlịkọn carbide kpo oku mmewere
W ụdị (atọ frasi) sịlịkọn carbide kpo oku mmewere
LD ụdị (otu gburugburu) sịlịkọn carbide kpo oku mmewere
pụrụ iche ụdị sịlịkọn carbide kpo oku mmewere
LS ụdị (abụọ gburugburu) sil ...
GDU ụdị sịlịkọn carbide ọ ...
W ụdị (atọ frasi) silico ...
LD ụdị (otu gburugburu) sil ...
pụrụ iche ụdị sịlịkọn carbid ...
Ihe ndị bụ isi e ji mara U ụdị sịlịkọn carbide kpo oku: U ụdị sịlịkọn carbide kpo oku mmewere na-synthesized si sịlịkọn carbide kpo oku mmewere na a nkịtị oyi ọgwụgwụ. Type pịnye sịlịkọn carbide kpo oku mmewere nwere ike jikọọ na ike ụdọ na otu njedebe nke oku. A na-ejikarị ya eme ihe maka akwa ọkụ ọkụ na akwa ọkụ nwere nnukwu ihe achọrọ maka nkezi ọkụ ọkụ. Ihe e ji mara ya bụ nchekwa ọkụ na ndụ ogologo ọkụ.
Ihe silicon carbide kpo oku ga-emeghachi omume na ọtụtụ kemịkalụ kemịkalụ site na ihe a na-ere ere n'oge agbapụ. Ọ bụrụ na ọ na-emetụta ụfọdụ gas dị ka mmiri, hydrogen, nitrogen, sọlfọ, halogen, na aluminom a wụrụ awụ, Mgbe alkalis, salts, wụrụ awụ, na ọla edo na-abata, ha nwere ike meghachi omume, mebie ma ọ bụ oxidized. Ya mere, ọ dị ezigbo mkpa ịmụta ụzọ eji eme ihe ziri ezi, nke na-agbatị ndụ ọrụ nke silicon carbide kpo oku, yana oke okpomọkụ na ogo ya dị elu.
1. The sịlịkọn carbide kpo oku mmewere nwere elu n'ibu ike, na ekwe ike dị elu dị ka 100-120MPa.
2. Igwe dị elu dị elu nwere ike iru ogo 1500.
3. High infrared radieshon ọnụego, hà dayameta sịlịkọn carbide kpo oku mmewere bụ 5-10 ugboro nke nkịtị nickel-chromium waya.
4. Ogologo oge na-arụ ọrụ, ntinye na ndozi dị mfe.
5. The sịlịkọn carbide kpo oku mmewere nwere ike ọxịdashọn na-eguzogide, ike corrosion eguzogide, na nwere magburu onwe thermal ujo-eguzogide.
Anyị nwere ike ịme nha ahụ na tebụl, naanị mee ka m mara nha ịchọrọ.
OKWU (D) AKWONEKWỌ AHONE (L1) OZI Oyi (L2) Anya (E) AH NA-EBUTA
OKWU (D) Ogologo 3
Nke gara aga: GC ụdị sịlịkọn carbide kpo oku mmewere
Osote: LS ụdị (abụọ gburugburu) sịlịkọn carbide kpo oku mmewere
Egwuregwu Electric Sic Heater
Ọkụ atinggba Ọkụ Ihe
Ihe eji egwu egwu
Silicon Carbide kpo oku Elements
Gburugburu Sic Heating Elements